Kedụ ụdị alụkwaghịm dị n’etiti ịkwanyere ugwu na ịkwanyere ndị isi ojii ugwu: n’Afrika, ọtụtụ amaghị etu esi eme ka ọdịiche dị n’etiti “Vengba Ọganị na Adorara”; ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị isi ji bilite n'ọkwá nke ndị bụ chi
Site na: KongoLisolona: Mee 24, 2020 09: 06 Enweghị asịsa
Ọ dị mma ịnwe nkwanye ùgwù miri emi maka ikike ma ọ bụ onye na-egosi gị akara: nnukwu nkwanye ugwu ma dị omimi, "Ọ bụ nsọpụrụ", kama ọ ga-aga iru ala isi ...	GỤKWUO
Olee ebe anyi siri puta dika ndi nna anyi ha no? Ajụjụ ndị dị mkpa na ndị metụtara ihe abụghị ihe ndị ọzọ na-ekwu "" Ndị nna nna anyị nke ndị isi ojii / ndị Africa nwere mmasị na ha kemgbe chi ọbụbọ "
Site na: KongoLisolona: January 8, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Anyi nuru ka ndi sayensi na ama akwukwo na mba Europe kwuru na anyi si na umu Adaka. The Judo-Christian and Islamic dogmatic na-ekwu na anyị sitere na ndị mbụ…	GỤKWUO
Kagame, ọ ga-ebi n'ụbọchị ikpeazụ ya? Dị ka Mobutu, ụnyaahụ, Kagame na Museveni na-enwe mmetụta dịka "ụmụaka a hụrụ n'anya" nke ndị America nọ n'Africa ma ọ bụ ha nwere ike imeli ihe nile: "Major Kagame (n'aka nri aka nri) na ọzụzụ ndị agha na United States na Fort Leavenworth, Kansas, na 1990 (Site nchịkọta nke President Paul Kagame) »
Site na: KongoLisolona: July 15, 2019 00: 00 Enweghị asịsa
N'ihe niile, enwere mmalite, ma ọ bụ njedebe. Mobutu amawo mmalite nke ochichi ya n'okpuru nchedo nke CIA, ma o mere ka o chee na ya adighi. Nsogbu dị egwu ...	GỤKWUO
Ụmụ nwanyị Uganda na-ahapụ ụmụ ọhụrụ ha bụ ndị Chinese mụrụ: N'ọgbè Uganda nke Oyam, ihe karịrị ụmụ nwanyị iri na abụọ na-agbalị ịzụlite ụmụaka a mụrụ na afọ ndị a.	GỤKWUO
Nwaanyị kacha pụta ụwa: A na-akpọ Mariam Nabatanzi aha ya bụ Nalongo Muzaala Bana (nne ejima na-amịpụta quadruplets), aha ọjọọ o kwesịrị… (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: November 5, 2018 03: 00 Enweghị asịsa
Womanmụ nwanyị kachasị nọ n'ụwa na 18 afọ, Mariam Nabatanzi mụrụ ụmụ ejima, usoro ihe atọ, usoro anọ anọ, yana ọmụmụ ole na ole…	GỤKWUO
Aug13 02: 24